भिडियो बाहिर आएको प्रति बडो गम्भिर सर्बेन्द्र खनाल – All top Here
Home/समाचार/भिडियो बाहिर आएको प्रति बडो गम्भिर सर्बेन्द्र खनाल
भिडियो बाहिर आएको प्रति बडो गम्भिर सर्बेन्द्र खनाल
Breaking News : मेरो केहि मिनट अगाडी ९ मिनट ४८ सेकेण्ड IGP Sarbendra Khanal ज्यु संग गम्भिर कुरा भयो ! भिडियो कसरी बाहिर आयो सवै अनुसंधान भइरहेको र कडा निर्देशन दिएको जनकारी गराउनु भयो ! भिडियो बाहिर आएकोप्रति बडो गम्भिर चासो व्यक्त गर्नु भएको छ !
रवि लामिछानेसहित ३ जनालाई जिल्ला अदालतबाट ५ दिनको म्याद थप गरेपछि प्रदर्शनकारी थप आक्रोसीत बनेका थिए । उनिहरु रविलाई रिहा नगरेसम्म जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडीको क्षेत्रबाट नहट््ने भन्दै साँझपख पनि नारा लगाउदै बसेका थिए । ज्ञानेन्द्र शाही आज चितवन आएपछि जनसागर उर्लिएको छ । साथै रमेश प्रसाईले रबि लामिछानेलाइ प्रहरी कार्यालय भित्र आज भेट गर्नुभयो । रबिको समर्थक आमालाई प्रहरीले लाठि प्रहर गरेपछि माहोल आपतिजनक बनेको थियो ।
बसमा उभिएकी महिलाको हातमा पछाडिबाट चिसो आएपछि…
प्रधानमन्त्री ओली आइसियूमा,
घाटमा लैजान लागेको श’व जुरुक्क उठेपछि अर्का व्यक्तिको नि’धन